दाइको १४ इन्च को लिंगले घोप्टो पारेरा गर्दा त घोडाले गरेको जस्तै भो.( यौन कथा ) // 1nepali Sex Story - Nepali Sex Tube
दाइको १४ इन्च को लिंगले घोप्टो पारेरा गर्दा त घोडाले गरेको जस्तै भो.( यौन कथा ) // 1nepali Sex Story
यस्तै ५ मिनेट जति पछि मैले उनको खुट्टा फटाएर अब चिक्ने अवस्थामा मिलाए । बिस्तारै मेरो लाँडो उसको पुतीको मुखमा लगे अनि बिस्तारै छिराउन खोजे । शायद उनको पुती भरी पानी भएकोले गर्दा होला , कुनै गाह्रो नभई मेरो लाँडो उसको पुतीमा स्वात्तै भित्र छिर्यो । “आहहहहहहहह” उनी कराई । अब म बिस्तारै बिस्तारै उनलाई चिक्न थाले । म जति उनलाई ठेल्थे , उनी त्यती नै तल बाट कण्डो हल्लाउँदै मलाई पनि ठेल्थी , यस्तो लाग्थ्यो उनी चिक्न र चिकाउन पनि सिपालु भई सकेकी थिई । मलाई कुनै मतलबनै थिएन , जे होस आज पनि एउटा पुती चिकिदै थियो । यही सम्झेर म उनलाई कस्सी कस्सी चिक्न थाले । उनी पनि मलाई तलबाट माथी उफ्रिदै साथ दिदै थिई । १० मिनेट जति यो अवस्थामा चिके पछि मैले मेरो लाँडो उसको पुतीबाट निकाले र उनलाई सोफाबाट उठाए । “तिमीलाई कस्तो लागि रहेछ रमिला ?” मैले अन्जान भएर सोँधे । “मलाई त अचम्म लागि रहेको छ, हामी कसरी यस्तो गर्न थाल्यौ है , मलाई त सपना जस्तो लागि रहेको छ । तपाई मेरो दाईको साथी , तर तपाईसँग नै म आज सेक्स गर्दैछु , दाईले थाहा पायो भने त बर्बादै हुन्छ ” उनले भनी । “कसरी थाहा पाउँछ र , तिमी पनि भन्दैनौ , म पनि भन्दिन , होईन ?” मैले जवाफ दिए । “त्यो त हो , तै पनि …….” उनले लजाउँदै भनी । “छोडदेउ यो कुरा , खै सोफामा हात राखेर घोप्टो परेर बस” मैले उनलाई सोफा तिर ढकेल्दै भने । उनी पनि मैले भने जस्तै गरेर बसी , हुनसक्छ उनले यो पोजिसनमा पहिले पनि चिकिसकेको हुनुपर्छ । उनी खुट्टा फट्याएर घोप्टो परेर चिक्न सजिलो हुने गरी बसी । मलाई खासै गाह्रो भएन र मैल उनलाई कुकुर ले चिकेको स्टाईलले चिक्ने बिचार गरे । बिस्तारै मेरो लाँडो उनको पुतीमा छिराए । “ऐय्याऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ दुख्यो , बिस्तारै गर्नु न , यसरी गर्दा त दुख्छ” उनले कराउँदै भनी । अनि मैले बिस्तारै उनको पुतीमा लाँडो छिराए र बिस्तारै बिस्तारै धक्का दिन थाले ।
उनी “आहहहहहहह ओहहहहहहह उफफफफफफफ” गर्दै कराउन थाली । उनका ती सुस्केराहरूले मेरो जोश बढ्न थाल्यो र बिस्तारै बिस्तारै चिकाईको स्पीड बढाउन थाले । अब भने म फुल स्पीडमा उनलाई चिक्न थाले । “कचक कचक कुचुक कुचक ठ्याप ठ्याप” यस्ता आवाजहरू सो कोठामा गुञ्जीरहेको थियो । म बल गरी गरी उनलाई पछाडिबाट चिक्दै थिए , उनी पनि कण्डो हल्लाउँदै मलाई साथ दिदै थिई । उनी निकै जोशमा कराउँदै थिई “अझै कस्सेर , अझै कस्सेर ……….. अलि छिटो…….. अलि छिटो………” म पनि भएभरको बल लगाउँदै उनको कम्मर समाउँदै चिक्न थाले । करीब ७-८ मिनेट जती चिके पछि मेरो माल झर्ला जस्तो भयो अनि फुत्त मेरो लाँडो उसको पुतीबाट बाहिर निकाले । “किन निकाल्नु भाको , गर्नु न प्लिज” रमिला स्वाँ स्वाँ गर्दै कराउन थाली । “एकछिन न , मेरो झर्न लाग्यो क्या” मैले भने अनि उनलाई मतिर फर्काएर फेरी किस गर्न थाले । एक हातले फेरि उसको पुती खेलाउन थाले । २-३ मिनेट पछि मैले उनलाई भुईमा कोल्टे पारेर सुताए अनि म उनको पछाडी पटी कोल्टे परेर सुते । उनको एउटा खुट्टा माथि तिर उचाले अनि बिस्तारै उनको पुतीमा मेरो लाँडो छिराए । यसरी चिक्दा मेरो पुरै लाँडो उनको पुती भित्र त छिरेन तर पनि चिक्न मजा नै आउने रैछ । बिस्तारै बिस्तारै पछाडी बाट उनलाई चिक्न थाले । यसरी धेरै बेर चिक्न सकिन , थाकिदो रैछ र पुनः उठेर उनलाई उतानो बनाए अनि उनको दुबै खुट्टा मेरो काँध माथी राखे र फेरि उनलाई चिक्न थाले । यसरी चिक्दा चै पुरै लाँडो उनको पुती भित्र छिर्यो । म बल गरी गरी उनलाई यसरीनै चिक्न थाले , उनी फेरी “आहहहहहहह ओहहहहहह उफफफफफफ, अझै अझै …….. छिटो छिटो……..” भन्दै कराउन थाली । यसरी लगातार ५ मिनेट जति चिके पछि , मैले मेरो लाडोबाट निस्केको माललाई सम्हाल्नै सकिन र उनको पुती भित्र सबै माल झारिदिए । म थाकेर निकै शिथिल भए र उनको माथी नै पल्टि रहे । शायद रमिलालाई अझै चिकाई पुगेको थिएन क्यार , उनी मुनिबाट कण्डो हल्लाउँदै “गर्नु न प्लिज……….” भन्दै कराउँदै थिई । म बचेको बल प्रयोग गर्दै फेरि हल्लिन थाले । लाँडो सुकेर लुत्रुक्क परि सकेको थियो , तै पनि उनलाई माथीबाट धक्का दिँदै थिए । २ मिनेट जति पछि म हल्लिनै सकिन र लाँडो बाहिर निकालेर उसको छेउमा पल्टिए । उनी पनि स्वाँऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ स्वाँऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ गर्दै लामो लामो सास फेर्दै थिई । ५ मिनेट जति हामी त्यै अवस्थामा पल्टि रह्यौ । “कस्तो लाग्यो रमिला?” मैले सोँधे । “रमाईलो भयो , खुशी लाग्यो , मजा आयो” उनले लामो लामो सास फेर्दै भनी । “मलाई पनि मजा आयो , तिम्रो अनुहार मात्रै होईन सबै थोक राम्रो रहेछ , I Love You” भन्दै उनलाई किस गर्न थाले । उनले पनि “I Love You” भन्दै मलाई अंगालो हाली र किस गर्न थाली । “ल अब सुत्न जाउँ ल, भोलि फेरि गर्ने नि है” भन्दै म उठेर कपडा लाउन थाले । उनी पनि “हुन्छ हुन्छ” भन्दै उठी र कपडा लाउन थाली । “गुडनाईट, I Love You” भन्दै म उसलाई किस गरे अनि हामी छुट्टियौ । उनी पनि “Thank You, I Love You Too” भन्दै बाथरुम तिर लागी । म पुरै थाकेको ले कोठामा छिर्न बितिकै खाटमा पल्टे । रमिलाको दुधको पोका, पुती , उनलाई चिकेको झलझली आँखामा आई रह्यो , कतिबेला बिहान हुन्छ अनि फेरि चिकौला भन्ने सम्झँदा सम्झँदै म भुसुक्कै निदाएछु ।
Categories Nepali Sex Story, New Sex Story, Sex Stories, नेपाली यौन कथा, यौन कथा Post navigation
कम्मरमा बेरिएका हात // 18+// Nepali Sex Story
उतानो पारेर पल्टाए र मजाले पुती जीब्रोले खेलाउन सुरु गरे // 18+ // Nepali Sex Story